Djibouti Iyo Saamaynta Xaaladda Cusub Ee Geeska Afrika, Gaar Ahaan Itoobiya | Hayaan News
Hargeysa(Hayaannews): Maanta waxan BBCda ka dhegaystay in goob ciidan oo ku taala gobolka Tojura ee dalka Jabuuti koox dablay ah ay weerartay dhimasho iyo dhawaana ay jiraan. Alleh ha sahlo eh dagaalada qoomiyadaysan ee dalka Itoobiya waxay u egyihiin kuwo ka sii daraya maalinba maalinta ka dambaysa kana sii gudbaya xataa xuduudihii Itoobiya. Mustaqbalka dhaw dhulka ay soomaalidu degto halka ugu dhaw in la isla soo jiidhi karaa waa dalka Jabuuti oo aan xamili karin inta ugu yar hadii la isla soo jiidho. Gaar ahaan hadii Qoomiyadda Canfarta oo dhulkoodu hadda sadex dal ku dhex qaybsan yahay ( Itoobiya, Calatariya, iyo Jabuuti) ay u arki arkaan fursad in ay hal dhinaca isugu lugo duwato.
Cali Maxamed Yuusuf (Cali-GUREY)